ဦးဝီရသူကတော့ ထုံးစံအတိုင်း စကိုင်းနက် ကနေ ထပ်ပြီး မီးမွှေးသွားတာပေါ့ဗျာ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မိတ္ထီလာ အဓိကရုဏ်း မင်းကိုနိုင် နှင့် RFA မေးမြန်းခန်း
Kaung Kin Ko: 969 VS 786 »
Source: Kaung Kin Ko‘s status.
အဲလိုပဲ ပြည့်ဝတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ၊ ဘာသာမဲ့တွေလည်း လူအချင်းချင်း တန်ဖိုးထားဖို့ share နေကြတာပဲလေ။ နောက်ပြီး ဦးဝီရသူလို တအား အစွန်းရောက်တဲ့ သူကိုတောင် ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့က မွတ်စလင်တွေက (ဘာတခုမှ ဝေဖန်ပုံမရ) စကိုင်းနက် ဗွီဒီယိုမှာလည်း ဘာမှ ပြောမသွားဘူး။ တတ်နိုင်သမျှ ပြဿနာ မဖြစ်ချင်လို့ပဲ ယူဆပေးလိုက်ပါတယ်။ (တကယ်တော့ ဦးဝီရသူကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးသင့် ပြောသင့်တယ်) အဲဒီတော့ မနေ့က သူငယ်ချင်း တယောက် ပြောသလို “မွတ်စလင်အားလုံး” သွေးထိုးလှုံဆော်တဲ့ နေရာမှာ တသံတည်း ညီတယ် ဆိုတာ လုံးဝ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျနော့် မိတ်ဆွေ မွတ်စလင်တွေ share ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲက အဆိုအမိန့်တွေ၊ ကျနော့် မိတ်ဆွေ မွတ်စလင်တွေ share ထားတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ အဆိုအမိန့်တွေ Facebook မှာ ရှိတာကို ပြလိုက်ချင်တယ်။ အဲလိုပဲ ဒီလိုသတင်းတွေ ဖြန့်ချီကြတဲ့ သတင်းထောက် အများစုတွေ၊ စာနာကြတဲ့သူတွေကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲဗျ။ ဒီတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး။ ဗုဒ္ဓဘုရားနဲ့ကတော့ ပိုတောင် မဆိုင်သေးတယ်။ ဗုဒ္ဒရဲ့ အဆိုအမိန့်တွေကြောင့် တချို့သူတွေ နှလုံးသား မကြမ်းတမ်းကြတာပါ။
This entry was posted on March 27, 2013 at 11:55 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
5 Responses to “ဦးဝီရသူကတော့ ထုံးစံအတိုင်း စကိုင်းနက် ကနေ ထပ်ပြီး မီးမွှေးသွားတာပေါ့ဗျာ”
March 27, 2013 at 12:06 pm | Reply
ရဲတွေကိုချည်း ဖိပြောနေတာ၊ အကြမ်းဖက်တဲ့သူတွေကိုချည်း ပစ်ဖို့ ခတ်ဖို့ ဖိပြောနေတာ ကိုတော့ သဘောမကျဘူးဗျာ။ (ပြောတော့ ပြောသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကို အဓိက မထားသင့်ဘူးလို့ ယုံကြည်တာပါ) အကြမ်းဖက်တဲ့သူတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ရမယ် ဆိုပေမဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ ရေးနေကြသူတွေတောင် သူတို့အရေးအသားတွေ အရ အခွင့်ရပြီး ပြဿနာလည်း မဖြစ်ဘူးဆိုရင် သတ်ကြမယ့်သဘော၊ သတ်တာ ဖြတ်တာကို အားပေမယ့် သဘောရှိတယ်။ အဲလိုလူတွေ ရာခိုင်နှုန်းအရ နည်းမယ်ဆိုရင်တောင် အရေအတွက်က တော်တော်များတယ်။ ဒီလူတွေ အကုန်လုံးကို နှိမ်နင်းဖို့ဆိုတာ ဖြစ်မှ မဖြစ်နိုင်တာ။ ဒီတော့ ရဲတွေကို ဖိပြောပြီး တကယ့် သွေးထိုးနေသူကို ငြိမ်းချမ်းရေးသမားအဖြစ် နေရာပေးတာက ပိုဆိုးသေးတယ်။ သွေးထိုးသူတွေကို အရေးမယူဝံ့ဘူး ဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံး အဲဒါတွေ ဆက်မလုပ်ဖို့၊ သတင်းမှားတွေ hate speech တွေ မဖြန့်ဖို့ လုပ်မှပဲ ရေရှည်မှာ ထိရောက်လိမ့်မယ်။ အဲလိုမှ မလုပ်ရင်တော့ ဒါမျိုးတွေ ဆက်ဖြစ်လို့ မနှိမ်နင်းရင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲ သေမှာ။ နှိမ်နင်းရင်ကော (မသိမှု၊ သွေးထိုးခံရဲမှုကြောင့် အကြမ်းဖက်ကြတဲ့) မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲ သေမှာပါပဲ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲ သေမှာပဲ။ ဆေးမြီးတိုလေးတွေနဲ့တော့ မကုစေချင်ဘူးဗျာ။ တကယ့် လက်သည်တွေကို နာမည်ကောင်းချီးမြှင့်တာမျိုးလည်း မဖြစ်သင့်ဘူး။ တကယ့်လက်သည်တွေကို အရေးယူဖို့ ၊ အနည်းဆုံး သွေးထိုးတာတွေ ထပ်မလုပ်ကြအောင် တားဆီးဖို့ အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
March 27, 2013 at 12:40 pm | Reply
Kaung Kin Ko shared RFA Burmese’s photo of Wira Thu visiting the homeless refugees in Meikhtila and talking to Muslim Refugees.
ဦးဝီရသူက ကောင်းရှာပါတယ်ဗျာ။ သရုပ်ဆောင် ပြောတာ။
ခရေငယ် ကတော့ ပြောတယ်။ ထမင်းအိုးကြီး ရိုက်ခွဲပြီးမှ မုန့်ပျားသလက် ဝေတာတဲ့။
မန္တလေးမြို့ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဆရာတော် ဦးဝီရသူ မိတ္ထီလာမြို့ ဒုက္ခသည်များကို သွားရောက်တွေ့ဆုံစဉ်
Kaung Kin Ko ရွှေညဝါကိုအပြစ်တင်ကြတာက အရင်က ဦးဝီရသူကို ဂုဏ်ပြုပွဲ လုပ်ပေးဖူးတယ်။ မကြာသေးဘူးဗျ။ ဘာသာရေး လွတ်လပ်မှု ဆု ဆိုလားပဲ။ သူလည်း မြန်မာဘင်လာဒင်လို့ကြွေးကျော်သူကို သွားဂုဏ်ပြု၊ စကားကလည်း အသက်နဲ့လဲပြိး ကာကွယ်မယ် ဆိုလား ပြောတော့ ဘယ်ကြည်မလဲဗျ။ ဘင်လာဒင်နဲ့ ပေါင်းနေတဲ့သူကို မကြည်သလိုပေါ့။ ကျနော်လည်း ရွှေညဝါကို သိပ်မကြိုက်ဘူး။ အဲလို ဂုဏ်ပြုပွဲမှာ သူပြောတယ် ဆိုတဲ့စကားတွေကလည်း သွေးထိုးတာ ဆန်သလိုပဲ။ သိပ်မကြာသေးဘူးနော်။
Kaw Kaw Kyo အင်း…အဲ့လိုတွက်ပြတော့လည်း ဟုတ်နေတာပဲ..ဒါပေါ့..အားနည်းတဲ့ဖက်က ကြားဝင်သူကို အပြစ်မပြောဘူး…ဟုတ်တယ်…ဖြစ်နိုင်ပါတယ်…။ နောက်…ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာက…ရခိုင်မှာ ဖြစ်ပြီးကတည်းက မကြည်တဲ့ အခံနဲ့ အငြိုးတေးထားသလားလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်…အဲ့ဒီမှာ…ဦးဝီရသူ ရဲ့ ဓမ္မအဓမ္မ မင်းကိုနိုင် ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ ဆိုတာမှာ..မင်းကိုနိုင်အခုလို ဘွရောက်တာပဲဖြစ်မယ်.. ဟီဟိ..။ ဒါဆို အဲ့ဒီစကားကို ကိုကောင်းတို့ အနေနဲ့ ဦးဝီရသူ အမုန်းစကားပြောတယ်လို့ မြင်လိမ့်မယ် မွတ်စ်မ်တွေဘက်က အနာပေါ်တုတ်ကျသလို..သို့တည်းမဟုတ်…စော်ကားခံရသလို မြင်လိမ့်မယ်..ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့…သတိထားစရာလို့ပဲမြင်တယ်…အာဇာနည်နေ့ သံဃာဆွမ်းကပ်ချင်တာ ကပ်ခွင့်မရဘူးဆိုတဲ့ စကားကို ဆက်စပ်ပြီးတော့ ပေါ့။
Kaung Kin Ko အင်း Kaw Kaw Kyo မြင်ချင်သလို မြင်တော့ဗျာ။ လက်လည်း ညောင်းပြီ။ ကျနော်ကတော့ ဘယ်တော့မဆို ငြိမ်းချမ်းလိုသူ၊ စိုးရိမ်နေသူတွေနဲ့ သဘောထားက တထပ်တည်းပါ။း-) လူတိုင်း ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်တော့ လိမ်လို့ မရပါဘူးလေ။ ဝီရသူကို ထောက်ခံမယ် ဆိုလည်း သဘောပါ။ ကျနော်ကတော့ ဆန့်ကျင်လို့ ရသမျှ ဆန့်ကျင်ကြောင်း ပြောပြိးပြီ။ ဘာလို့တုန်းဆိုတော့ ဆက်သွေးထိုးနေတာတွေ ရှိနေသေးလို့ပါ။
Kaw Kaw Kyo အဲ့ဒီ ပွဲဆိုတာကို ကြားမိသလောက်ပဲ ဖြစ်ပြီး သတိမထားမိဘူး… အင်းလေ…ဒါတော့ အပြန်အလှန် အမုန်း ဆက်စပ်အမုန်းတွေကြောင့် ဘာတတ်နိုင်မလဲ..အခုလို ပြဿနာတွေကြောင့် မျက်နှာဖုံးကွယ်ပြီး ရခိုင်ကိစ္စကတည်းက မကျေနပ်တဲ့ မွတ်စ်တွေက မျက်နှာကို ကွယ်ပြီး ရန်မာစကားနဲ့ပဲ သေနတ်ကြီးကိုင်လို့ ခြိမ်းခြောက်သံတွေ ဗွီဒီယိုတွေ တက်လာတယ်ဗျာ…နောက်ပြီး နောက်နှစ်န်ှစ်အတွင်း မြန်မာပြည်ကို အသေခံဗုံးခွဲသူတွေ ထည့်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေသူလဲ ရှိသဗျာ.(ဒါကတော့ သူဒေါသနဲ့ ပြောတာပဲ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရမှာပဲ…ခိခိ)..။ကျွန်တော်တောင် သည်ရက်ပိုင်း သတိအတော်ထားနေတယ်…ခုနကလည်း မက်ဆေ့ခ်ျဘောက်စ်ကနေ အကိုတစ်ယေက်က နှုတ်ဆက်ခါနီး သတိပေးသွားလို့ ပိုသတိထားပါတယ်။
Zin Sonny Naung Han Is this monk wirathu for real? Whatadouble headed snake. And people (the victims) and the organizers n patron still associate with this person. Whatashame. Have we become all blind and deaf? Have you not heard what he preached? I am speechless.
March 27, 2013 at 12:50 pm | Reply
နိုင်ငံ တနိုင်ငံဟာ ပြည်သူတွေနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အစိုးရပဲ ရတတ်တယ်တဲ့။ အဲဒါက မှန်သလိုလို ရှိပေမဲ့ တကယ်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ “မင်းတို့နဲ့ ဒါပဲ တန်တယ်၊ ဒါပဲယူ” ဆိုရင်တော့ ဘယ်တော့မှ တိုးတက် လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံ တော်တော် များများမှာ သာမန် ပြည်သူတွေ ဆိုတာဟာ နေရာတကာမှာတော့ ဗဟု သုတတွေ ပြည့်စုံနေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူလို ကိုယ်လို ပါပဲ။ အဖြူထည်တွေ ပါပဲ။ ကွာသွားတာက ခေါင်းဆောင် နေရာ ရယူနေကြတဲ့ အလွှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆိုရင်တော့ မီဒီယာ၊ အင်တာနက်သုံးနိုင်သူ၊ တခုခုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ၊ ပရိသတ်ရှိသူ အဲလို လူတွေ အားလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်။ ခြုံငုံပြီး အပေါ်ယံအလွှာလို့ ကျနော် သုံးလိုက်ပါမယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာ အဲဒီ့ အပေါ်ယံလွှာ အင်အားစုကြီးရဲ့ ပျမ်းမျှ အရင်အချင်းနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အစိုးရကို ရနေတာလို့။ ပြည်သူဆိုတာက မှန်ချင်တဲ့ အခါ မှန်မယ်။ လမ်းလွဲကို ပို့ခံရရင် မှားချင်တဲ့ အခါ မှားသွားနိုင်တယ်။ ဥပမာ ပြည်သူအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်နေတာမျိုး၊ ပြည်သူက ပြည်သူကို အနိုင်ကျင့် နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ မှားတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူကို အပြစ်တင် လို့တော့ ရမှာမဟုတ်ပါ။ ထူးလာမှာလည်း မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ..အပေါ်ယံလွှာက လူတွေက အမှန်တရားကို မပြောဘဲ အမှားတွေဆီကိုပဲ တွန်းပို့ နေမယ် ဆိုရင် ပြည်သူတွေဟာ လမ်းကြောင်း အမှား ပေါ် ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုအခါမျိုးမှာ အပြစ်တင် သင့်တာက ပြည်သူမဟုတ်ပါ။ ပြည်သူ တွေက ဒီမိုကရေစီနဲ့ မတန်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ ပညာတတ် လူတန်းစားတွေရဲ့ ပျမ်းမျှ အရည် အချင်းကသာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မတန်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်ယံ ပညာတတ်လွှာက လူတွေရဲ့ စုစုပေါင်း အရည်အချင်းက ပြည်သူတွေကို လမ်းမှန်ပေါ် မခေါ်နိုင်ဘဲ လမ်းမှားဆီ တွန်းပို့ နေလို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။
( Stereotype.ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းနှင့် အပေါ်ယံလွှာ၏ ပြဿနာ စာစုမှ စာသားတချို့)
(ကောင်းကင်ကို) ခေတ်မောင်း ဂျာနယ် အဟောင်းထဲက ကဗျာအဟောင်းပါ
March 27, 2013 at 3:28 pm | Reply